Shirka Gudoomiyaasha Maxkamadaha sare ee Wadamada Carabta oo Masqat ka furmay, Soomaaliyana oo ka qayb galaysa ”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shirka Gudoomiyaasha Maxkamadaha sare ee Wadamada Carabta oo Masqat ka furmay, Soomaaliyana oo ka qayb galaysa ”SAWIRRO”
Shirka Gudoomiyaasha Maxkamada sare ee Wadamada ku bahoobay Jaamacadda Carabta oo sanadkan ay marti galinayso Saldanada Cumaan ayaa waxa uu ka furmay Magaala madaxda Dalkaas ee Masqat.
Shirkan oo ay sanadkan ka qayb galayaan wafdi heer sare ah oo uu horkacayo gudoomiyaha Maxkamadda sare ee Soomaaliya Garyaqaan Ibraahin Iidle Saleebaan iyo Gudoomiyaha Maxkamadda Racfaanka Sheekh Saalax Sheekh Ibraahin Dhiblaawe, sidoo kalena uu goob joog ka ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya ee Saldanada Cumaan Danjire Cabdirazaaq.
Shirkan oo soconaya muddo laba maalin ah ayaa waxaa looga hadlayaa sidii sidoo dhowr arrimood oo quseeya dhanka garsoorka xal looga gaari lahaa iyadoo ay arrimahaasna ka mid yihiin xal loo helo xalinta qilaafaadka kaasoo gudiyo garsoor loo saarayo, iyo in dowlaha qaar laga dhagaysto sida ay waayo aragnimo ugu leeyihiin.
Sidoo kale waxaa laga hadlayaa sidii xal looga gaari lahaa dib u dhaca ku yimaada dhagaysiga dacwadaha , iyo in dacwada si deg deg ah loo dhameeyo oo go’aan cadaalad ah looga soo saaro.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhanka Saldanada Cumaan Amiiro iyo wasiiro ka socday dowladaas oo iyagana qudbado halkaas ka jeediyay iyadoo maanta halkaas laga jeediyay qudbado ay soo diyaariyeen wadamada qaar barina qaar kale laga dhagaysan doono waayo aragnimadooda .
Madaxweynaha oo maanta kormeeray xarunta gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho